Ilaina ny fitsitsiana. Efa hatramin'ny ela no nifaninana ny mpanao asa tanana malagasy amin'ny famokarana fatapera mitsitsy saingy ao ireo tena tsy naharitra fa mora simba.
Nanao fikarohana maro Rarivoarison Heriniaina mirahalahy ao amin'ny Bira Factories ao Mahazoarivo Avaratra, Antanimenakely Antsirabe, ka tonga amin'ny fatapera mitsitsy pipa. Tsy mora ny fanamboarana raha ny zavatra hita maso satria mandalo famolavolana maro ireo akora fototra. « Tsy tongatonga ho azy izao fatana izao fa maro ny fanodinana sy fandroana atao ireo fatana amin'ny hafanana mihoatra ny 1200 ka hatramin'ny 1500 degre », hoy ny fanazavana nentin'ity mpamokatra ity.
Nanobmoka tamin'ny fanamboarana haingon-trano amin'ny alalan'ny tanimanga ireo mpirahalahy tamin'ny taona 1996. Rehefa nanaraka fiofanana sy fifanakalozana traikefa tamin'ny teratany vahiny izy ireo dia nanamafy ny fahaiza-manao ka tonga amin'ny fatapera mitsitsy pipa.
Tsy mandany, tsy mandoto, mora ampiasaina ary miaro ny tontolo iainana. « Mihena ny fampiasana arina mihoatra ny kitay satria mitotongana hatrany amin'ny 60% izany. Mitana hafanana sy entona kokoa ny fatana pipa. Azo ampiasaina aminy daholo ny apombo, ny kolakolankatsaka, rehefa mety ho hazo azo dorana. Raha mampiasa kitay iray kilao isika dia mamoaka hery hatramin'ny 2500 kilocalories io kanefa raha arina no dorana dia any amin'ny folo kilao any vao mahatratra izay herin'angovo izay », hoy ny fanampim-panazavana.
Tsy mbola tonga amin'ny famokarana avo lenta Rarivoarison satria mahafaty antoka azy izany. Ireo fikambanan-drelijiozy ao Antsirabe sy ireo fikambanana toy ny Tany Meva sy ny PAM. Raha fatana tsy voahodidina vy dia Ar 55 000 ny vidiny. Mantombo kosa ny sarany raha toa ka ireo fatana antsoina hoe « encastré » na « blindé » no vidiana, ka eo an'elanelan'ny Ar 100 000 ka hatramin'ny Ar 300 000 ny vidiny.